Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana filoham-pirenena: Hividy mpifidy araka izay tratra ny HVM
Fifidianana filoham-pirenena: Hividy mpifidy araka izay tratra ny HVM
Raha ny Lalàmpanorenana no arahina dia afaka 8 volana farafahatarany no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Efa mitodika any amin’izany fifidianana izany daholo moa ankehitriny ny mason’ireo mpanao pôlitika malagasy, indrindra fa ireo eo anivon’ny antoko HVM izay mitady ny fomba rehetra hijanonana eo amin’ny fahefana. Amin’izao volana maro mialohan’ny fifidianana izao dia efa hita mibaribary toy ny vay an-kandrina ny pôlitika maloton’ny fitondran-dRajaonarimampianina ahatongavana amin’izay tanjona izay. Misongadina amin’izany ohatra ny fanaovana antsojay ireo mpifanandrina ara-pôlitika aminy izay efa azo antoka fa hilatsaka ho fidiana, ny fametrahana lalàm-pifidianana ahafahana mangala-bato sy manome vahana ny kandidam-panjakana, eo ihany koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony azo atokisana fa hampandany ny kandidan’ny HVM. Tsy ho ampy anefa izany pôlitika maloto ataon’ny fitondrana izany fa mbola misy koa ny paik’ady hafa tsy maintsy hapetraka. Raha ny resaka mivoaka avy eny an-dapa eny dia efa manomana ny hividy mpifidy araka
izay tratra ihany koa ry Hery Rajaonarimampianina sy ny mpiara-dia azy amin’io fifidianana filoham-pirenena io, ankoatra ny fangalaram-bato amin’ny endriny hafa izay efa fanaon’ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena. Fantatra ny mpitondra tsara mantsy ny tsy fitiavan’ny vahoaka azy, indrindra fa ny mponina eto Antananarivo ka tsy maintsy tadiavina ny tetik’ady maloto rehetra mba ahafahana mijanona eo amin’ny fahefana. Marihana fa ho an’ireo kandida manana vola tsy toko tsy forohina ho laniana amin’ny fifidianana, tahaka ny kandidan’ny antoko HVM, dia tetik’ady iray heverina fa tsotra sy mora indrindra ny fividianana ny vaton’ny mpifidy. Tambazana vola 2 arivo ariary na 5 arivo ariary fotsiny ny olom-pirenena handeha handatsa-bato any amin’ny biraom-pifidianana mba hifidy ilay kandida tiana ho laniana. Hatramin’izay nisian’ny fifidianana teto amin’ity Madagasikara ity dia efa fomba ratsy fanaon’ny mpanao pôlitika malagasy ny fividianana ny vaton’ny mpifidy ka azo inoana zato isan-jato fa tsy maintsy hanao izany koa ny fitondrana ankehitriny. Ny mety hampiavaka azy fotsiny dia ho betsaka lavitra noho ny vola nampiasain’ireo mpitondra tany aloha ny vola ho ampiasain’ny HVM hividianana ny mpifidy amin’ity fifidianana filoham-pirenena manaraka ity.